मैलुङ खोला आईपीओ : कहिले हुन्छ बाँडफाँड ?, कति पर्यो आवेदन ? यसो भन्छ क्यापिटल - DURBAR TIMES
HomeShare Bazarमैलुङ खोला आईपीओ : कहिले हुन्छ बाँडफाँड ?, कति पर्यो आवेदन ?...
कति पर्यो आवेदन ?
मैलुङ खोला जलविद्युत कम्पनी लिमिटेडको आईपीओमा ३९ गुणा बढी आवेदन परेको छ । बिक्री प्रबन्धक सिद्धार्थ क्यापिटलका अनुसार २१ लाख १८ हजार ९२५ जना आवेदकले २ करोड ८५ लाख ४१ हजार ८४० कित्ताका लागी आवेदन दिएका छन् ।
कम्पनीले प्रतिकित्ता १ सय रुपैयाँ अंकित दरमा ७ करोड ३६ लाख २८ हजार ६ सय रुपैयाँ बराबरको ७ लाख ३६ हजार २८६ कित्ता आईपीओ निष्कासन गरेको हो । जसमध्ये २ प्रतिशत अर्थात् १४ हजार ७२६ कित्ता कम्पनीका कर्मचारी र ५ प्रतिशत अर्थात् ३६ हजार ८१४ कित्ता सामूहिक लगानी कोषका लागि छुट्याइएको छ, भने बाँकी ६ लाख ८४ हजार ७४६ कित्तामा सर्वसाधारणका लागी छुट्याइएको छ ।
विशेष खबर : छुट्ला है ! सानिमा लाइफ इन्स्योरेन्सको आईपीओमा आवेदन दिने आज अन्तिम दिन
कम्पनीको आईपीओमा मागभन्दा बढी आवेदन परेकाले गोला प्रथा विधिबाट बाँडफाँड गरिनेछ । गोलाप्रथा विधिबाट १० कित्ताका दरले बाँडफाँड गर्दा ६८ हजार ४७४ जनाले मात्रै कम्पनीको आईपीओ पाउनेछन् । त्यसैले आवेदन दिएका लगानीकर्ताहरुमध्ये २० लाख ५० हजारभन्दा बढीको हात खालि हुने छ ।
साउन महिनामै अर्को आइपिओ: बुद्धभुमि नेपाल हाइड्रोपावरले आइपिओ निष्काशन गर्ने
कहिले हुन्छ बाँडफाँड ?
मैलुङ खोला जलविद्युतको आईपीओ अर्काे साता बाँडफाँड गरिने भएको छ । सर्वसाधारणलाई प्राथमिक सेयर निष्कासन तथा बिक्री गरेको कम्पनीको आईपीओ अर्काे साता बाँडफाँड गरिने भएको हो । बिक्री प्रबन्धक सिद्धार्थ क्यापिटलका अनुसार अर्काे सातासम्म बाँडफाँड गरिसक्ने गरि तयारी भैरहेको छ । प्रिअलटमेन्टको काम भैरहेकाले अर्काे साता जुनसुकै बार पनि बाँडफाँड गरिने क्यापिटलले जनाएको छ । ढिलोमा शुक्रबारसम्म र छिटोमा त्योभन्दा अगाडि बाँडफाँड गर्ने गरि काम भैरहेको क्यापिटलको भनाई छ ।
Previous articleनिफ्राको खुद नाफा घटेसँगै प्रतिशेयर आम्दानी पनि घट्यो, कति छ ?
Next articleछुट्ला है ! सानिमा लाइफ इन्स्योरेन्सको आईपीओमा आवेदन दिने आज अन्तिम दिन
mailung kholaa ipo result